apo vakaremara mavans anonyanya kufarirwa pakati peavo vane kufamba nyaya, haisi iyo chete nzira yeiyo vakaremara kufamba. Zvichienderana nekuomarara kwemunhu kufamba nyaya, a vakaremara mota inogona kuve inonzwisisika nzira ye kutakura naizvo.
Sezvazviri nekutenga kombi, pane zvakawanda zvakasiyana zvinhu iwe zvauchazoda kutarisa mukati mawo pakutsvaga zvakanakisa vakaremara mota kuti ienderane nemararamiro ako.
anotonga: Yakagadziridzwa kutonga mukati me vakaremara mota inofanira kunge yakakura uye iri nyore kushandisa. Mamwe mamodheru anotobata bata skrini kuti zvinhu zvive nyore. Pamusoro pezvo, chero dhairekitori rekiyi nemahwindo zvinofanirwa kunge zvichingoitwa otomatiki.
kupinda: Mota zhinji hadzizopa zvakafanana kureruka-kwe-kuwana kunoitwa nemavans. Zvakadaro, vakaremara mota zvakajairika unouya neimwe nzira yekupinda makiyi kana kuchinjika kumusuwo zvinoita kuti kupinda nekubuda mumotokari kuve nyore.
nzvimbo: Yakawanda sei nzvimbo iri mumota? Une urefu hwakaringana uye nzvimbo yekutenderera here? Iwe unoda chero shanduko dzinozogarisa yako wiricheya?
Zvigaro: Kana zvinogoneka, ungangoda kutarisa kuti uwane vakaremara mota ine chigaro chebhenji pane zvigaro zviviri zvakasiyana. Zvigaro izvi zvinowanzoita nzvimbo yakawanda uye zvinonyanya kugadzikana kune avo vakaremara. Ivo vanofanirwawo kuuya nemasimba ekudzivirira anotendera mutyairi kugadzirisa chigaro kune kwavo kunyaradzwa kwakawanda.
Cruise Kudzora: vakaremara mota dzinonyanya kuve nyore kana dzichiuya ne cruise control. Izvi zvinoita kuti maitiro ekutyaira ave nyore pane iyo vakaremara mumwe nemumwe.
Maitiro Ekuchengetedza: Iwe unoda kuchengetedzwa kwakazara zvinhu ako vakaremara mota, sezvaungaita uine mota yakajairwa. Ita shuwa yako vakaremara mota inouya yakashongedzerwa neairbags uye anti-kukiya mabhureki.
kufamba: Zvizhinji zvakakosha yezvose, a vakaremara mota inofanira kugara iri otomatiki. Manual kufambisa kunongowedzera kuomera mutyairi uye kunogona kukonzera kushushikana uye tsaona.
Izvi zvingaite kunge zvakawanda kutsvaga, asi kana iwe ukashanyira mota yakawanda nehurongwa hwakatogadzirirwa munzvimbo, iwe uchave nechokwadi chekuwana yakakodzera vakaremara mota yako.
Kururamisira Iyo Mobility Resource
Ndokumbirawo zadza fomu pazasi kuti ugamuchire ruzivo maererano nekubvunza kwako. Unogona kutipa runhare ku 1-626-581-2235, kana ndapota tsungirira patinenge tichipindura kubvunza kwako.